LibreAquarium: Ku maaree aquarium-kaaga barnaamijka bilaashka ah | Laga soo bilaabo Linux
Kala soo xiriir emailka soosaaraha FreeAquarium, taas oo sida magaceeda ka muuqata, ay tahay codsi (Software bilaash ah) maamulka quraaradda.
Sida laga soo xigtay horumariyeheeda (yaa ii qiraya inuusan khabiir ku ahayn barnaamijyada), FreeAquarium wuxuu leeyahay jilid (Tusaalaha jilitaanka) taas oo u oggolaanaysa in laga sii odoroso qiyamka NO3, PO4 iyo Fe, taariikhda gorfeynta. Si la mid ah, waxay go'aamisaa halista algae waxayna ogeysiisaa haddii xaaladaha biyaha ee hadda jira ay ku habboon yihiin dadka deggan ee ku dhex jira quraaradda.
Aquarium Bilaash ah waxaa lagu horumariyey iyadoo Laasaros, oo sidaas awgeed waa qaab-dhismeed isku-dhafan, markaa waan heli karnaa rakibayo waayo, Windows, Linux iyo Mac. Waxaan kugu martiqaadayaa inaad soo dejiso oo isku day inaad ogaato aragtidaada ku saabsan. Xilligan saaxiibkay ayaa ii sheegay in ay maqan yihiin Goldfish😀
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » LibreAquarium: Ku maaree aquarium-kaaga Barnaamijka Bilaashka ah
Waxay u egtahay wax fiican, laakiin p rpms?
Waxaan ku soo dajiyey anigoo adeegsanaya xirmo deyn ah mana shaqeyneyso.
Waxaan ku tijaabinayaa Kubuntu 12.04 (32bits) wayna shaqaysaa.
Carassius auratus wuxuu ka muuqdaa keydka barnaamijka, ma aqaano waxa loola jeedo @elav. Barnaamijku wuxuu umuuqdaa mid wanaagsan laakiin wali ma fahmin sida loo isticmaalo.
Windousico, waxaad ku leedahay buug ku yaal websaydhka mashruuca. Saldhigyada dhexe ee noocyada (kalluunka, dhirta iyo rogaal celinta) waa kuwa noo oggolaanaya inaan xakameyno cabbiraadda noocyada aan ku darno aquarium-keena. Markii aan ku darno nooc, waxaa naloo ogol yahay in aan dooranno aquarium-ka iyo noocyada ay yihiin. Noocyada aan ku darno aquarium-keena waxay ka soo bixi doonaan saldhigga dhexe, tan iyo haddaanay ku jirin saldhigga la sheegay, ma jiro xakameyn baahidiisa kiimikada.
Xaquuqda ma jiri doono rakibaye sh
Ku jawaab Pcadav
Oh ma ogi, taasi waa waxa uu saaxiibkay ii sheegay, wali ma awoodin inaan soo dejiyo oo aan isku dayo codsigan 😛
Waad ku mahadsan tahay tabarucaadka, waxaanan fursad u helayaa inaan tijaabiyo astaanta aan helo.
Anigu waxaan joogaa LinuxMint 13 KDE laakiin waxaan kuxirannahay bogga iyada oo loo marayo mashiin dalwad leh W $ iyo astaanta W $ ayaa umuuqata… kaliya xiiso leh.
Caqli gal ah. Mashiinka dalwaddu waligiis garan maayo nidaamka hawlgalka ee uu ku shaqeynayo. Dhamaan ujeeddooyinka iyo ujeeddooyinka waxaad ka shaqeyneysaa biraawsar winbugs.
Noocyada ayaa maqan laakiin waa lagu dari karaa… waa inay jirtaa goob lagu wadaago cusboonaysiinta noocyada.
Aad baad ugu mahadsan tihiin tabarucaadka, waa uun waxa aan raadinayay, dabcan aqoon yar oo kumbuyuutar ah ayaa ah dalabka ugu haboon ee qofkasta, marka hore cillad ayaa ku booday digniin la qorsheeyay 2012 laakiin in la tirtiro wax kasta sida xariirta , markale Mahadsanid badan.